विराटनगर, ५ भदौ । कुकुर घरपालुवा स्तनधारी जनावर हो । घरको सुरक्षाका लागि मानिसहरु कुकुर पाल्ने गर्छन् । कुकुर मानिसहरूसँग अत्यन्त मिलेर बस्न सक्दछ । कुकुरको सुन्ने र सुँघ्ने शक्ति अत्यन्त तेजिलो हुन्छ । कुकुरले सधैँ आफ्ना मालिकको आज्ञा मान्ने भएकाले कुकुरलाई निकै इमान्दार मान्ने गरिन्छ ।
घरको रेखदेखको लागि पालिने कुकुर कतिपय मानिसहरूले शोखका लागि पनि पाल्ने गर्छन् । तर, पछिल्लो केही वर्षदेखि घरमा पाल्दै आएको कुकुरका कारण मानिसहरुमा रोगको जोखिम बढ्दो छ । कुकुरको स्याहारसुसार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, खोप आदिमा उचित ख्याल नगरिँदा कुकुरबाट सर्ने परजीवी र जुनोटिक रोगले मान्छेहरुमा समस्या देखिन थालेको छ ।
कुकुरको संक्रमित र्याल, नाक, मुखबाट निस्किने घुलित कण, पानीको स–साना थोपा, दूषित मलमूत्रसँगै मानिस सम्पर्कमा आउने गर्दा मानिसहरुमा रोग सर्ने गर्छ । जनावरबाट मान्छेमा सर्न सक्ने करिब सयभन्दा बढी जुनोटिक रोगहरु छन् । कुकुर मात्र नभएर खरायो, गाई, भेडाबाख्रा, चरा, घोडालगायतका धेरै जसो घरपालुवा जनावरले मानिसहरुमा रोग सार्न सक्छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, जुनोटिक तथा अन्य सरुवा रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा कुकुर पाल्नेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको कारणले रोगहरूसमेत मानिसहरुमा देखिन थाले पछि जनस्वास्थ्यका लागि चुनौतीका रूपमा देखिन थालिएको छ । रेबिज भाईरसबाट संक्रमित भएका पशुहरुको टाकाइले सर्ने रोगलाई रेबिज भनिन्छ । धेरै जसो मानिसमा देखिने रोबिज रोगले ग्रसित कुकुरको टोकाइबाट हुने गर्दछ ।
कुनै पनी मानिस रेबिज रोगवाट ग्रसीत भएमा रेबिज लागेको कुकुरले मानिसलाई टोकेर वा चिथोरेर संक्रमित र्याल सारेपछि भाइरसले गर्दा मानिस तथा अरु पशुको मस्तिस्क, आँखा, मुख, नाकमा रोगको प्रभाव देखिन थाल्छ । मानिसमा भाइरस प्रवेश गरेदेखि रोग देखा पर्न १० दिनदेखि वर्षौँ पनि लाग्न सक्छ । मानिसमा टोकेको ठाउमा दुख्ने, झम्झमाउने, एक्कासी चिलाउने जस्ता लक्षण देखा पर्नुका साथै ज्वरो अउनु, जाडो लाग्नु थकित हुनु, मांसपेशी दुख्नु, रिसाउनु, बझ्ने तथा झर्कने जस्ता लक्षणहरु देखिन सक्छ ।
यसको अन्तिम अवस्थामा पुग्दा बिरामीलाई श्वास फेर्न गार्हो हुने, खानेकुरा निल्न नसक्ने, मांशपेसीहरुमा कम्पन हुने, दुख्ने र पानीसम्म निल्न गाह्रो मान्ने हुन्छ । रेबिज लागेका बिरामीहरु पानीदेखि तर्सने गर्दछन् । अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामी प्रायः बाँच्दैनन् । सामान्यतया पशुले टोकेमा हामीले नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गएर उचित सल्लाह तथा उपचार गरी, रेबिज रोगको जोखिममा पर्ने सम्भावना भए अस्पताल गएर जाँच गराइ यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ । कुकुरको टोकाइबाट रेबिज मात्र नभइ लुतो, छालाको समस्या, एलर्जी, जुका, किर्नाबाट हुने विभिन्न रोग, हाइडेटेड सिस्ट, लेप्टोस्पोरोसिसलगायतका अन्य थुप्रै प्रकारका रोग पनि सर्न सक्छन् ।
पेट हस्पिटलका अध्यक्ष एवं पशु चिकित्सक डा. शरदसिंह यादवले घरपालुवा जनावरलाई सामान्य हेरचाह गरेर कुकुरबाट सर्न सक्ने रोगबाट धेरैहदसम्म बँच्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । स्वच्छताका लागि मुख्य रूपमा साबुनपानीले हात धुने गर्नु पर्छ । यसका साथै घरपालुवा कुकुरलाई रेविजविरुद्ध खोप लगाउनु पर्दछ । पहिलोपटक खोप लगाउँदा ३ महिनाको उमेर कटेपछि लगाउने र प्रत्येक वर्ष यो खोप लगाइ राख्नु पर्दछ । कुनै जनावरले टोके सिधैँ अस्पताल गइ डाक्टरको परामर्श लिन आवश्यक छ ।